मनोरञ्जन – Page2– Nepali news portal
१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार १५:३५ March 3, 2021 पर्वत डेष्क
पर्वत÷ कोभिड–१९ले रोकिएका महोत्सवहरुसुचारु हुनथालेका छन् । पर्वतमा कोभिड–१९ घटेपछिको पहिलो जिल्लाको ठुलो दोस्रो राष्ट्रिय मगर महोत्सव भएको छ । पर्वतको सदरमुकाम कुश्माबजारमा पर्वतमा क्रियाशिल पुनयुवा क्लवद्धारा ३९ औ मगरदिवसको अवसरमा आयोजित १५ फागुनबाट सुरु भई २५ फागुन सम्म ऐतिहासिक राष्ट्रिय मगर महोत्सव अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरु भईरहेका छन् । महोत्सवमा राष्ट्रिय तथा स्थानियकलाकारहरुको प्रस्तुतीले […]
माघे संक्रान्तिमा गोरु जुधाई परम्परा
२ माघ २०७७, शुक्रबार १३:०३ January 15, 2021 पर्वत डेष्क
पर्वत÷प्रत्येकवर्ष माघेसंक्रान्तिको दिनमा गोरु जुधाई प्रतियोगितागरि मनोरञ्जन लीईने परम्परा अनुरुप पर्वत जिल्लाको फलेवास नगरपालिका वडा नं. ८ ठानामौला नेपानेमा गोरु जुधाई गरिएको छ । छ वटा गोरुको सहभागिता गरिएको प्रतियोगिता रहेको गोरु जुधाई प्रतियोगितामा भंगराबाट ल्याईएको गोरु प्रथम, ठानामौलाबाट ल्याईएका गोरु द्धितिय र तृतिय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । भगराका सुमित परियार, ठानामौलाका […]
युरो किड्सद्वारा मिस नेपाल नम्रतालाई सम्मान
३ पुस २०७७, शुक्रबार १५:०८ December 18, 2020 काठमाडौं डेष्क
काठमाडौं युरो स्कुलको प्रि स्कुल युरो किड्स गोगंबुले मिस नेपाल नम्रता श्रेष्ठलाई शुक्रबार नगदसहित सम्मान गरेको छ । नम्रता युरो किड्सकी शिक्षिका हुन् । टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारी र टोखा नगरपालिका वडा नं. ८ का अध्यक्ष केशवबहादुर खत्रीले एक कार्यक्रमबीच नम्रतालाई प्रशंसा पत्र र नगद २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरी सम्मान गरे । मेयर […]
२२ मंसिर २०७७, सोमबार १५:५० December 7, 2020 काठमाडौं डेष्क
काठमाडौं , नायिका स्वेता खड्का आजबाट वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी छिन् । काठमाडौंको गोकर्ण रिसोर्टमा धनगढीका विजयेन्द्र सिंह राउतसँग सोमबार उनले विवाह गरेकी छन् । स्वेताले आफ्नो स्टाटस मार्फत आफ्नो दोस्रो बिहेलाई समाजका केही व्यक्तिले स्वीकार गर्न नसक्ने उल्लेख गरेकी थिइन् । यसअघि उनको नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग विवाह भएको थियो । श्रेष्ठको २०७१ साउन २५ गते […]
१८ मंसिर २०७७, बिहीबार १३:३९ December 3, 2020 काठमाडौं डेष्क
काठमाडौँ, श्वेता खड्का मंसिर २२ गते धनगढीका विजयन्द्र सिहं रावतसँग विवाहबन्धनमा बाधिदैँ छिन् । उनीहरुले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा विवाह गर्न लागिको विवाह र्काडमा उल्लेख छ । विवाहमा दुई परिवार निकट सदस्यकोमात्र उपस्थिति हुने छ। कहाँ भेटिएला सिनेमाबाट नेपाली रजतपटमा डेब्यू भएकी श्वेताको यो दोश्रो विवाह हो। यसअघि उनले २०७१ साल असार २३ गते अभिनेता श्रीकृष्ण […]
२६ कार्तिक २०७७, बुधबार १६:५० November 11, 2020 पर्वत डेष्क
कोभिड–१९ ले कलाकारिता क्षेत्रपनि निकै प्रभावित भएको छ । कोभिडले कलाक्षेत्र निकै प्रभावित बनेको पर्वतको कुश्माबजारस्थित मैत्रीचोकमा गोपालयोञ्जन कला प्रतिष्ठानका संचालक मानजी सुरागमले बताएका छन् । विगत १५वर्षदेखि गितसंगित,नृत्य सिकाउदै आएका सुरागमले कोभिड– १९ नआएको भए हालै चैत्रबाट हालसम्म करिब ४ देखि ७ लाख आम्दानीहुने बताएका छन् । सुरागमले धौलागिरीकै स्टेज प्रोगाममा आफ्ना म्युजिसीयन बाधबाधन […]
११ कार्तिक २०७७, मंगलवार १८:१२ October 27, 2020 काठमाडौं डेष्क
काठमाडाैं, नायिका सुहाना थापाले यस बर्षको दशैं आफ्ना पिता सुनिलकुमार थापा र आमा झरना थापाको साथमा मनाएकी छिन् । साथै, आफ्नै घरमा परिवारसँग उनले टिका लगाइन् । सुहानाले सामाजिक संजालमा दशैंमा परिवारसँग टिका लगाउन पाउँदा खुशी लागेको बताउँदै तस्वीर शेयर गरेकी छिन् । कोरोना भाइरसका कारण यसपटक कलाकारहरुले दशैंको टिका परिवारमा मात्र सिमित गरेका […]
काठमाडौं, फणिन्द्र नेपाल / रातोपाटी । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय नाम हो मोहन वैद्य ‘किरण’ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिवसमेत रहेका वैद्य अहिले सक्रिय कयौं कम्युनिस्ट नेताका राजनीतिक गुरु पनि मानिन्छन् । तडकभडक र सुख–सुविधाबाट टाढा सादगीपूर्ण जीवन बिताउँदै आएका वैद्य कम्युनिस्ट भएकै कारण धर्मप्रति खासै रुची राख्दैनन् । हिन्दु धर्मावलम्बीहरु यतिबेला दसैँ मनाइरहेका […]